Amadoda aneempumlo okanye indlela yokufumana imilebe epheleleyo | Amadoda aQinisekileyo
URosie Huntington-Whiteley, uLindsey Wixson kunye noDaphne Groeneveld, phakathi kwabanye, benza iimagi zanxiba, kodwa ayisiyonto yabo bodwa. Ifashoni yamadoda nayo iqale ukubonisa Ukukhetha imilebe epheleleyo, ekhangeleka yendalo. Iimodeli ezingakumbi nangakumbi kunye neegcisa zibonakala zinobuso obuncinci.
Ukuba ufuna wandise umthamo wemilebe yakho ngendlela echuliweyo Ukomeleza umtsalane ngaphandle kwamaqabane akho eofisini esazi ngqo ukuba loluphi utshintsho olwenzileyo ebusweni bakho, jonga ezi ngcebiso zingezantsi.
Bhrasha imilebe yakho ngebrashi yamazinyo eyomileyo rhoqo kwiiveki ezimbini okanye njalo. Oku kuyakususa iiseli zolusu olufileyo, zibancede zibonakale zigudile. Ukongeza, i-massage abaya kuyifumana kwi-bristles iya kuba negalelo ekubanikeni umzimba kunye nombala ngenxa yokuphucuka kokujikeleza kwegazi kwendawo.
Ukuba ulusu lwakho lubuthathaka, cinga ukwenza ukukhuhla kwendalo. Zininzi iindlela zokupheka ezifanelekileyo, kodwa eyona ibonakala ilula kuthi kukuxuba iswekile kunye namanzi ukwenza uncamathiselo. Masaja kwimilebe yakho emva koko usule ukuze ususe iiseli ezifileyo, iibhaktiriya kunye nayo nayiphi na inkunkuma efakwe nkqu nakwezinzulu zeepore.
Xa imilebe yomntu ingazalisanga ngokwendalo, ukukhutshwa exfolie kuhlala kungonelanga. Ukuba le yimeko yakho, uya konwaba xa usazi ukuba umzi mveliso wezithambiso ubeka ezandleni zakho Unisex zonyango ezingabizi kakhulu ezinokukunceda uzigcwalise, ezinje ngemilebe yeFillderma okanye iVolumax Triactive.
Ngaphandle kwenkathalo yangaphandle, kukho omnye umkhwa wokufezekisa imilebe ethambileyo negcweleyo: umthambo. Ukuhlala usenza iintshukumo ezithile kunokunceda ukuba udumbe imilebe. Ukubethela umlozi izihlandlo ezimbalwa ngemini kuthintela imilebe yomlomo, eyonyusa ivolumu yayo. Olunye umthambo olula osebenza kakuhle luncumo. Gcina uncumo lubanzi ngangokunokwenzeka ngaphandle kokuvula umlomo wakho imizuzwana emihlanu. Emva koko bakrwempe, ubatyhalele kude ebusweni, kangangemizuzwana emininzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Iimpuphu zifikile kwimfashini yamadoda ... yandisa imilebe yakho
Imithetho emithathu yegolide yee-t-shirts ezongezelelweyo
I-Luxury imaginative-I-Villas edadayo yenxalenye yaseDubai